Qoysaska degen Deegaanno katirsan Shabeelaha Dhexe oo cabsi…
Deegaanno katirsan Gobolka Shabeelaha Dhexe waxaa ka bilawday barakac ay sameynayaan qoysaska degen hareeraha deegaannada uu maro Wabiga Shabeelle ee Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa walwal ka muujiyay Fatahaad uu ku sameeyo.
Wabiga ayaa biyo badan keenay, cabsida ugu weyn ee heysata qoysaskaan ay tahay in uu karkaarada ku jabsado, maadaama deegaanno katirsan Gobolka Shabeelaha hoose uu ku fatahay.
Meelaha jilcan oo ay dadka u arkaan in biyaha wabiga jabsan karaan waxa ay dhigeen jawaanno carro ay ka buuxiyeen, si dhul beereedkooda dallaga ay ku beereen oo ay sugayaan gurashadiisa u badbaadiyaan.
Xaafado katirsan Degmada Jowhar wabiga ayaa meelo kooban fatahaad yar ka sameeyay, halka Degmada Mahadaay tuulooyinkeeda qoysaska degen ay la nool yihiin walwal ka dhashay biyaha Wabiga Shabeelle uu ka sare maray meelihii uu joogay maalmo kahor.
Dadka kunool deegaannada uu maro Wabiga waxa ay sabab ugu dhigeen buux-dhaafidda Roobabka ka da’aya deegaannadaas, Xareeda oo ku hooreyso iyo biyo badan Wabiga kasoo saaray dhanka Itoobiya.
Sababta keentay walwalka waa biyo xireen la’aan, kolka Wabiga uu buux-dhaafiyo lagu kala yareyn jiray, taa badalkeed marka buuxsamo waxa uu ka butaacaa meelaha jilcan karkaarada Wabiga.